मुलुकमा उत्पन्न असहज परिस्थितिको वोधले भ्रमण स्थगित गरेँ - मूल्याङ्कन अनलाइन
कमल गिरी | March 8, 2017
(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भोलि फागुन २६ गतेदेखि सुरु हुने गरी तय भएको आफ्नो युरोप भ्रमणलाई स्थगित गरेका छन् । युरोपमा उनले त्यहाँ रहेका माओवादी केन्द्र पार्टीका कार्यकर्ता तथा पार्टी निकटका अन्य नेपालीहरुले राखेका बिभिन्न सम्मेलन तथा कायक्रमहरुमा प्रमुख अतिथिको रुपमा भाग लिने सेड्युल तय गरिएको थियो । त्यस्तै गरी नेता प्रकाशले युरोपेली देशहरु बेलायत, स्विट्जरल्याण्ड, बेल्जियमलगायतका सांसद तथा सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटघाटको सेड्युल पनि तय गरेका थिए । तर, भ्रमण सुरु हुन दुई दिनअघि नै उनले अकस्मात युरोप यात्रालाई स्थगित गरेको घोषणा गरे । खास गरी सप्तरी घटनाबाट निकै दु्ःखी बनेका नेता प्रकाशले त्यही घटनाबाट मुलुकमा उत्पन्न हुन सक्ने असहज राजनीतिक परिस्थितिलाई आंकलन गरेर त्यसप्रति आफ्नो भूमिकाको आवश्यकताको वोध गरी आफ्नो युरोप भ्रमण रद्द गरेको उनी बताउँछन् । यसै सन्दर्भलाई लिई मूल्याङ्कन अनलाईनका लागि कमल गिरीले उनीसँग लिएको अन्तर्वार्ता संक्षिप्त रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । – सम्पादक)
मू : तपाईंको लामो युरोप भ्रमण स्थगित भएको कुरा बाहिर आयो ? यस्तो किन भएको हो ?
– मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिको कारणले जान उपयुक्त लागेन । अहिले स्थानीय चुनावको तयारी पनि गर्नु छ । यसअघि चुनावको मिति घोषणा भएको र स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको पनि टुङ्गो लागेर एउटा स्थिति बनेको थियो र त्यस स्थितिमा देशबाहिर जाने वातावरण देखिएको थियो । तर, म जानु अघिल्लो दिन सप्तरीमा जुन घटना घट्यो, त्यसले एउटा असहजको परिस्थिति बनिरहेको छ । मधेसी मोर्चाले अहिले मधेसमा जुन सङ्घर्ष गरिरहेको स्थिति छ यस अवस्थामा देशबाहिर जानु उपयुक्त हुन्न भन्ने लागेर मैले युरोप भ्रमणलाई स्थगित गरेको हुँ ।
मू : राजबिराज सप्तरीमा भएको घटनाले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुनै प्रभाव पार्छ ?
– अहिले नै निर्णयक रुपमा यसले कुनै असर पारिसकेको छैन । तर,स्थानीय चुनावको औचित्य र स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने कार्यलाई कुनै असर पार्न दिनु हु्ँदैन । द्वन्द्व, कटुटा र तनाव बढ्न दिनु हु्ँदैन । सबैंले धैर्य र संयम अपनाउनु पर्दछ । समझदारीको वातावरण बनाउँदै चुनावमा जानुपर्दछ ।
मू : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठाइरहेका छन् । अहिले मधेसकेन्द्रित दलहरुले सरकारलाई दिइरहेको समर्थन फिर्ता लिने कुरा गरिरहेछन् । यसबाट नयाँ राजनीतिक सिनारियो त देखापर्न आउने होइन ?
– हामीले राष्ट्रिय सरकारको आह्वान त पहिलेदेखि नै गरेका हौं । अहिले राष्ट्रिय सरकारको परिस्थिति बन्छ भने त हामी त्यसलाई सहजै रुपमा लिन्छौं । तर, अहिले नै वर्तमान राजनीतिक समीकरण भत्किने र नयाँ अरु बन्ने स्थिति त मैले देखेको छैन ।
मू : तपाईंले युरोपमा पार्टी कार्यक्रममा भाग लिनका लागि यसअघि पनि भ्रमणको समय मिलाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेर पनि मिलाउन कठिन भइरहेको र अहिले बल्ल मिलाउनु भएको भन्ने तपाईं निकटबाट सुनिन्छ । तर, अहिले त्यो रोकिन गयो । यसबाट तपाईंका युरोपस्थित कार्यकर्ताहरु निराश हुन्नन् ?
– पक्कै पनि मेरो भ्रमण स्थगित हुँदा युरोपमा रहेका साथीहरु दुःखी भएका छन् । भ्रमणको क्रममा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा मेरो टक प्रोग्राम हुनेवाला थियो । बिभिन्न देशका मन्त्रीहरुसँग भेटघाटको सेडुल तय भएको थियो । युकेका सांसदहरुसँगको भेटघाटको सेडुल तय भएको थियो । त्यस्तै गरी बेल्जियमका सांसदहरुसँग पनि भेटघाटको कार्यक्रम तय गरिएको थियो । इङ्ल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्डका सांसदहरु तथा सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटघाटको कार्यक्रम तय भइसकेको थियो । बिभिन्न ठाउँका पार्टीका कार्यक्रम तथा जनप्रगतिशील मञ्चहरुका सम्मेलनहरु तय भएका थिए । अब ती सबै ठाउँहरुमा मेरो अनुपस्थिति हुने भयो । त्यसैले साथीहरुलाई, आयोजकहरुलाई धेरै दुःखी बनाएको छ मेरो भ्रमण स्थगित भइदिनाले । तर,
, यहाँ मैले खेल्नुपर्ने भूमिकाको वोधले मेरो अनुपस्थिति देशमा खड्किने स्थिति बन्यो । यो कुरालाई साथीहरुले बुझे । साथीहरु तथा आयोजकहरुलाई उत्पन्न असहज स्थितिलाई लिई मैले सार्वजनिक रुपमै माफी पनि मागेको छु ।
« ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निर्वाचन आवश्यक’ (Previous News)
(Next News) सप्तरीमा घाइते थप एकको मृत्यु, मृतक सङ्ख्या चार »